१०१ थपिँदा १५५ जना निको भए, हालसम्म कुन जिल्लामा कति संक्रमित ? (सूचीसहित) - Everest Dainik - News from Nepal
काठमाडौंः नेपालमा आज थप १०१ जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण देखिएको छ । यो अहिलेसम्म दैनिक वृद्धि भएको सर्वाधिक सङ्ख्या हो ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. विकास देवकोटाले नियमित पत्रकार सम्मेलनमार्फत मंगलबार दिउँसो ९० जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको जानकारी दिएका थिए ।
मंगलबार साँझ सप्तरीमा थप ११ जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ । जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख दुनियाँलाल यादवका अनुसार नयाँ संक्रमितमा १ जना महिला र बाँकी सबै पुरूष रहेका छन् ।
याे पनि पढ्नुस यी हुन् कोरोना भाइरसबारे नयाँ र बुझ्नै पर्ने २३ कुरा (सूचीसहित)
संक्रमितहरूमा बोदेबरसाइन नगरपालिकाका ८, बलानबिहुल गाउँपालिकाका २ र सुरुङ्गा नगरपालिकाका १ जना छन् । सप्तरीमा देखिएका कोरोना संक्रमितबारे मन्त्रालयले यो समाचार तयार पार्दासम्म जानकारी दिएको छैन । मन्त्रालयले दैनिक दिउँसो ४ बजे पत्रकार सम्मेलनमार्फत जानकारी दिने गरेको छ ।
योसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या ७८३ पुगेको छ । संक्रमितमध्ये चारजनाको मृत्यु हुँदा १५५ जना निको भएका छन् ।
मंगलबार मात्रै ४३ जना व्यक्ति कोरोना जितेर घर फर्किएका छन् । नारायणी अस्पतालमा उपचाररत ७ देखि ५३ वर्ष उमेरका उनीहरू निको भएर घर फर्किएका हुन् । डिस्चार्ज हुनेमा २ महिला र ४१ पुरूष रहेका छन्।
याे पनि पढ्नुस १ युवकमा कोरोना संक्रमण पुष्टिपछि मैतीदेवी क्षेत्र सिल
मन्त्रालयका अनुसार संक्रमित सबैको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहेको छ भने उनीहरुरू सबै चिकित्सकको निगरानीमा रहेका छन् ।
अहिले प्रदेश नं ५ र २ मा सर्वाधिक सङ्क्रमित छन् । मङ्गलवार अपराह्णसम्म देशका विभिन्न स्थानमा ५५,२८२ जना क्वारन्टीनमा भएको मन्त्रालयको तथ्याङ्कले देखाएको छ ।
याे पनि पढ्नुस अतितलाई सम्झाउँदै कोरोना भाइरस
यो अहिलेसम्म क्वारन्टीनमा भएका मानिसको सर्वाधिक सङ्ख्या हो ।
तीमध्ये प्रदेश नं ५, प्रदेश नं २, सुदूरपश्चिम प्रदेश र कर्णाली प्रदेशका क्वारन्टीनमा सर्वा्धिक सङ्ख्यामा मानिसहरू छन् । उनीहरूमध्ये अधिकांश व्यक्ति भारतबाट फर्किएको बताइएको छ ।
नेपालमा अहिलेसम्म ५४,४२४ वटाभन्दा बढी नमुनाको पीसीआर विधिबाट परीक्षण गरिएको छ ।
अहिले छिमेकी देश भारतमा सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या बढिरहेको छ ।
भारतबाट बिनपरीक्षण अनियन्त्रित रूपमा नेपालीहरू फर्किँदा रोग फैलिने सम्भावना बढेको विज्ञहरू बताउँछन् ।